Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Israel » Gaa Leta Betlehem Mgbe You Ka Nwere Ike
Israel choro ka ndi njem nleta no na ulo uka ndi Israel di oke onu ma ha na eme atumatu ime ya ihe na-ezighi ezi iji kpuchie onu ala West Bank na Betlehem. Jerusalem na Betlehem dị kilomita ole na ole site n’ebe dị anya, ma ọtụtụ ndị njem nleta na-aga obodo abụọ a. Ma ọ bụrụ na Israel nke ime obodo nwere ụzọ ya, ọ ga-esi ike ihi ụra na Betlehem dị ka akụkụ nke njem ọ bụla.
Iwu ọhụrụ a ga-eme ka ọ bụrụ iwu megidere ndị njem nleta na-abata n’Izrel dịka akụkụ nke ndị na-eme njem nlegharị anya ka ha rahụ na West Bank. Iwu a, enyere na ọnwa gara aga, kpọtụrụ aha Betlehem kpọmkwem ma yie ka ebumnuche maka ndị njem uka nke Ndị Kraịst. Ọ gaghị emetụta ndị njem n'otu n'otu.
Ọ bụ ezie na Mịnịstrị na-ahụ maka ime ihe na mbụ kwuru maka nsogbu nchekwa, ndị ọrụ njem njem nke Israel na Palestine kwuru na ebumnuche a bụ iji kpuchido ụlọ nkwari akụ Israel, nke dị oke ọnụ karịa ụlọ oriri na ọ Bankụ inụ dị na West Bank, site na ida ahịa. Na njedebe, mgbe mkpu ọha na eze gasịrị, Mịnịstrị ahụ hapụrụ njem ahụ, mana ndị na-eme njem n'akụkụ abụọ na-eche na enwere ike iweghachite ya n'oge ọ bụla.
Bethlehem, tinyere Chọọchị nke N'ihe ngosi nke Ọmụmụ, na Jeriko dị ka obodo kasị ochie nke mmadụ biri, abụwo ebe ndị a na-aga njem njem ala ọzọ ruo ọtụtụ narị afọ. Ọgba aghara dị na mpaghara ahụ, ọkachasị mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na Israel na West Bank, nwere nnukwu nsogbu na njem. Esemokwu esemokwu dị n'etiti Israel na ndị Islamist Hamas na Gaza, nke kachasị nso na 2014, yana usoro ịwakpo na ịgba égbè na 2015 na 2016 mere ka ọtụtụ ndị njem ghara ịga.
E nwere ihe ịrịba ama, Otú ọ dị, njem na-aga azụ. N’April, ndị Israel nwere ndị njem njem kachasị elu na otu ọnwa, na ndị njem nleta 394,000 gara mba ahụ, ịrị elu 38 pasent site na otu oge n'afọ gara aga. Ọ dị mkpa iburu n'uche na, ọbụlagodi afọ kachasị mma nke Israel maka njem - 2012, nke nwere nde mmadụ 3.5 - na-acha ọcha ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ Middle East. Dịka ọmụmaatụ, Tunisia nwere ndị njem nleta nde 4.5 na 2016, n'agbanyeghị mgbukpọ abụọ nke gburu ọtụtụ ndị njem nleta n'afọ gara aga. N’afọ 2010, ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ nde mmadụ asaa bịara Tunisia.
N'oge na-adịghị anya mgbe ekwusịrị iwu machibidoro ịnọ abalị na Betlehem, ndị mba ọzọ na-eme njem nlegharị anya. Ndị na-eme njem nleta n'akụkụ abụọ nwere otu edepụtara nke ọma n'afọ ọzọ. Akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi na-ekwu na anabataghị mịnịstrị nke ndị njem na Israel.
"Ọ (iwu) ga - enwe mmetụta dị njọ ọ bụghị naanị na ndị Palestaịn kamakwa na ndị ọrụ njegharị Israel," Sami Khoury, onye isi oche nke Holy Land Income Tour Operators Association (HLITOA gwara The Line Line). Khoury na Sheppard Tours na-arụ ọrụ ma na-agba ọsọ ahụ mkpokọta websitepapalestine.pa, saịtị njem maka ndị njem nọọrọ onwe ha na-achọ ịkpa nka ha nwere ahụmahụ West Bank.
Ndị Palestine na-ekwu na ọ bụrụ na etinyere ya, iwu Israel nwere ike inwe mmetụta na-emebi ihe.
"Njem nleta bụ ndụ nke ọtụtụ obodo Palestine, dị ka Betlehem na Jeriko," onye isi oche nke Green Olive tours, Fred Schlomka, gwara The Media Line. Green Olive Tours were otu dị iche iche site na Israel na West Bank iji gbalịa ịnye ndị ọbịa nlele n'akụkụ abụọ nke esemokwu ahụ.
Ọtụtụ puku ndị njem na-aga West Bank kwa afọ, Schlomka kwukwara na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa ya bụ ndị njem na-achọ ịmata ihe nwere mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe nke mpaghara ahụ.
Nicki Spicer dị afọ 52, bụ dọkịta ezinụlọ si United Kingdom nke gafere ụwa, kwuru, sị, "Achọrọ m ịga Palestine ma chọtakwuo banyere akụkọ ihe mere eme, nkà mmụta ihe ochie ndị mmadụ na ọdịnala ha," Etiti ọwụwa anyanwụ.
Spicer na-atụ ụjọ ịga leta West Bank ọ na-atụ ụjọ na ndị Israel agaghị anabata ya maka ịgbalị ịga mpaghara ahụ. "M na-echegbu onwe m ma a ga-ekwe ka m banye na Palestine site na omenala ndị Israel ma ọ bụrụ na m mere njem ahụ," Spicer gwara The Media Line site na email. Ama m na obi agaghị adị m mma otú ọ ga-adị m ma ọ bụrụ na m na-eme atụmatụ ime njem ịga Spen. ”
Ministri nke ime ime obodo agwaghị Green Olive Tours maka iwu ahụ. Schlomka kwenyere na mkpebi mbipụta iwu a, n'agbanyeghị na emesịrị oyi, ọ metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịa nchekwa ndị njem. "Ọ bụ ọdịda nke Israel pụọ na ụkpụrụ nke mba ndị kwuo uche ya," Schlomka kwuru.
Ministri nke njem na Palestine Authority kwuru na mmụba dị ukwuu nke ndị ọbịa n'abalị, ebe 39,700 ndị njem nleta na-ehi ụra na West Bank karịa afọ gara aga.
Enweghi onu ogugu nke otutu ndi njem nleta na Israel na aga Betlehem maka ubochi.
Israel na-achịkwa ókèala ya na West Bank, na-eme ka o siere ndị Palestian ikike ịmara onye na-abanye ma na-ahapụ mba ahụ na ihe kpatara ya.
Khoury kwuru na nleta abali dị mkpa maka akụ na ụba karịa ndị na-eme njem ụbọchị. Nnukwu ìgwè ndị njem ga-eme njem ọkara ụbọchị na mpaghara Palestine, dị ka Betlehem, na nleta ndị a dị mkpụmkpụ, na echiche Khoury, enyela ndị njem nleta oge zuru ezu iji chọpụta ma tinye ego na ebe ha gara. O kwenyere na mkpali n'azụ mmachibido iwu ahụ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kamakwa akụ na ụba. Ọ dị ọnụ ala karịa ịnọ na Betlehem karịa ịnọ na Jerusalem, yana ọganihu ndị njem ugbu a na-eme na West Bank, Khoury chere na mmụba asọmpi ahụ nyere Israel ọtụtụ ihe kpatara ime.
"(Palestine) ugbu a nwere ike ịsọ mpi na ọnụahịa, ọrụ, na akụrụngwa na ụlọ nkwari akụ Israel," Khoury gwara The Media Line.
Madison Dudley bụ nwa akwụkwọ nta akụkọ nke The Media Line
Environmentbọchị Gburugburu Worldwa: Emirates Airlines wepụtara azịza ya
Delta Air Lines na-efega Seoul-Incheon site na Atlanta International Airport